QISADII NABI AADAM | Gaaldiid
Bogga Hore > QISADII NABI AADAM
1.0.1 Inta Aanan ka waramin Qisada Nabi Aadam, waxa haboon in aan wax ka nidhaahno sideebuu ahaa Koonka ka hor Nabi Adam naxariista Eebe korkiisa ha ahaatee.Marka kowwad Eebe “ALLAH” wuu jiray, Ayadoo aanay cid kale oo noola ah Koonka jirin, waanu jiri doonaa Abidkii. Ilaahbaa xumaan iyo nuqsaanba ka nasahan.
1.0.2 Nabi Aadam waxa loo dhalay Laba wiil oo la dhaho Haabiil iyo Qaabiil, sida caadada ah waxay Xaawa uurka ku qaadi jirtay Wiil iyo Gabadh mataano ah sanadkiiba. Markaa wiilka sanadka hore dhasha waxa uu guursanayaa gabadha dhalata sanadka danbe, Gabadha sanadka horena wiilka sanadka danbe dhasha ayey Guursanaysaa.
Inta Aanan ka waramin Qisada Nabi Aadam, waxa haboon in aan wax ka nidhaahno sideebuu ahaa Koonka ka hor Nabi Adam naxariista Eebe korkiisa ha ahaatee.Marka kowwad Eebe “ALLAH” wuu jiray, Ayadoo aanay cid kale oo noola ah Koonka jirin, waanu jiri doonaa Abidkii. Ilaahbaa xumaan iyo nuqsaanba ka nasahan.
Wixii ugu horeeye uu Eebe abuuray waxa weeye Carshigiisa, muddo kadib Eebe waxa uu abuuray Qalinka. Qalinkiibaa Eebe amray in uu Qoro. Qalinkii waxa uu yidhi “Eeboow maxaan Qoraa?” Eebe waxa uu ugu Jawaabay “Qor waxkasta oo jiray, jiridoona illaa inta ay maalinta Qiyaamaha ka dhacayso.” Waxkasta siduu noqon doono iyo cidhib danbeedkiisaba waxa laqoray kontonkun oo sano ka hor intaan Eebe abuurin Dhulka iyo Cirarka.